दुर्गेश थापा के हो यो ख्या,स्स पुतली भनेको ? चेलीबेटिले तीज मनाउन पाएनन भनेर किन खुशी भाको दुर्गेश ? (भिडियो सहित) « Etajakhabar
पछिल्लो समय उनी नयाँ गीत ‘बीच्च बीच्चमा ४ मा प्रयोग गरिएको ख्या,स्स पुतली’ शब्दका कारण उनी विवा,दमा तानिएका छन् । उनको गीतमा प्रयोग भएको यो शब्द हटाउ,नका लागि उनलाई लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले चेता,वनी पत्रसमेत पठाएको थियो । तर उनले प्रतिष्ठानको चेता,वनीलाई बेवा,स्ता गरेर गीत रिलिज गरे । दुर्गेशको यही बिषयमा रहेर पुन्य गौतमले आफ्नो बिचार राखेका छन हेरौ उनले के भने